Burma Partnership » NDD Monthly Chronology Events June – 2010
By Network for Democracy and Development • July 6, 2010
These chronologies include information on the activities of the SPDC and USDA, opposition groups, armed ethnic groups, cease-fire groups, international governments and non-governmental organizations, and civilians inside Burma and along its borders.
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်အခြေ စိုက်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်သော Network for Democracy and Development (NDD) သတင်းနှင့်သုတေသနဌာနမှ တစ်လအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေအနေ အဖြစ်အပြက်များကို လစဉ်ဖြန့်ဝေလျှက် ရှိပါသည်။
ထိုလစဉ်မှတ်တမ်းတွင် နအဖနှင့် ကြံ့ဖွံ့ တို့၏ လှုပ်ရှားမှု သတင်းအချက်အလက်များ အပါအဝင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့များ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၊ လက်နက်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လဲလှယ်ထားသော အဖွဲ့များ၊ နိုင်ငံတကာ အစိုးရ နှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြန်တွင်းပြည်ပမှ ပြည်သူလူထုတို့၏ လှုပ်ရှားမှု များနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်း ပြည့်စုံစွာ စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။
Download this month’s report in Burmese.
Tags: Burmese, Election Laws, Ethnic Nationalities, Monthly Chronology Events, Network for Democracy and Development, Political Parties